कथा : टुक्रिएको स्मृति
– त्रिपुरा पोखरेल, सिक्किम
“काइँली बिमारी छन् हेर्न जाँदिनौं ?” मेरी बाल्यकालकी सखाले माइती घरतिर जाने बाटोमै मलाई खबर गरिन् । मेरो बाल्यकालको स्मृतिमा विस्मृत प्रायः भइसकेकी काइँला दाइकी काइँली फेरि मेरो मानसपटलमा देखा परिन् । माइतीघरमा ब्याग राखेर म फेरि बाहिरिएँ । हामी दुईजना पैदल नै काइँलीको घरतिर हानियौं । किन हो कुन्नि, माइतीमा पाइला राख्ना साथ मलाई आफ्नो बालापन पुनः फर्किएको अनुभूति भयो ।
सेतै फुलेकी, मुखभरि चाउरिएर मुजा परेको छाला, छालाले मासु छोडेको अवस्थामा ओछ्यानमै बिलाउन आँटेकी काइँलीलाई देख्दा म तर्सिएँ । समय र रोगले मान्छेलाई यो अवस्थामा पु¥याउँदो रहेछ भन्ने सोचाइले म झस्किएँ । छेउमा झुन्डिएको ऐनाले पनि मलाई गिज्याइरहेको भान भयो । मैँले डराएर त्यतातिर हेरेँ, मेरो मनमात्र घरि केटाकेटी, घरि जवान हुँदोरहेछ भन्ने कुराको सत्य साबित गर्यो ऐनाले । “काइँली, हामीलाई चिन्यौ?” मैले उसको कान नजिक मुख लगेर सोधें । उनले टाउकोको इशाराले चिनेको संकेत दिइन् । सायद तिनको पोइले हामी गेटबाट छिर्दा नै हाम्रो परिचय गराइसकेको हुनुपर्छ ।
बाबुआमाकी काइँली छोरी भएकोले तिनलाई सबैले काँइली भन्छन् । सबैले काइँली भन्ने गरेकाले मेरो जिब्रोले पनि तिनलाई काइँली नामले नै फड्र्काथ्यो । उनलाई सम्बोधन गर्नका लागि काइँली बाहेक अरु कुनै आदरार्थी शब्दहरू थिएनन् । “तीर्थ नानी म बजार गएर आउँछु एकछिन् भाउजूसँग बसिदिन्छौ कि ?” खडकुँलोभरि मासु बोकेर र मलगायत अरु भुराभुरीलाई बाटोमा नबस भन्दै गाली गर्दै धकेल्ने उही सत्र/अठारका काइँला दाइ रहेछन् । उनी अझै पनि हृष्टपुष्ट देखिन्थे । हामी दुवैले तिनलाई बजार जाने स्वीकृति दियौं ।
मैले ओछ्यानमा सुतेकी काइँलीलाई एकपल्ट फेरि सरसर्ती हेरें । त्यतिखेर मेरो कानमा कामतका केटाकेटीहरूले गीतको भाकामा गाएका दुई वाक्य गुञ्जिन थाले, “पल्लो गाउँमा स्याल करायो काइँलोले धमिनी भगायो ।” अर्को थियोे “आङ्लाङबाङ आङ्लाङबाङ ढुङ्गा हानाहान धामी दाइ र काइँलाको खुट्टा तानातान ।” आङ्लाङबाङको अर्थ अझैसम्म पत्ता लागेको छैन ।
केटाकेटी छँदा मलाई खेती जान असाध्यै रहर लाग्थ्यो । मंसिरको जाडोमा हजुरआमाको पछि लागेर खेती जान्थ्येँ । कामत पुग्दा समुचा शरीर धुलो र फुस्रो हुन्थ्यो । म यसैमा रमाउँने गर्थें । केटाकेटीदेखि नै मलाई शहरको देखावटी संस्कारभन्दा गाउँको वास्तविक जीवन रम्य लाग्दथ्यो ।
हामी खेतीमा पुगेपछि त्यहाँको रौनक नै अर्कै हुन्थ्यो । कामत घरको आँगनमा हरूवा र बटियादारको भीड लाग्थ्यो । हजुरामा आँगनको बीचमा राखेको बेन्चमा बस्नुहुुन्थ्यो । उनीहरु कागजमा धर्का तानेर धानको हिसाब बुझाउँथे । म धर्काको हिसाब बुझ्दिन थिएँ । खेल्ने उमेरमा मलाई हरहिसाबबारे बुझ्ने रहर पनि थिएन ।
हजुरआमाको आँखा छलेर म मृगले बुर्कुसी मारे झैँ बुर्कुसी मार्दै कामतका झुपडीहरू चहार्दै हिंड्थें । मलाई त्यहाँको स्वच्छन्दता खुबै मनपथ्र्यो । केटाकेटी नाङ्गै भुतुुङ्गै भएर धुलो खेलिरहेका हुन्थे, खोलाको मट्याइलो पानीमा पौडी खेल्थे, डुबुल्की लगाउथे । उनीहरूलाई फोहोर पानीमा नजा, लुगा लगा, धुलो नखेल् भनेर रोकटोक गर्ने कोही थिएनन् । बिहान बेलुकी पढ्नुपर्छ भन्दै हप्कीदप्की गर्ने आमाहरू त्यहाँ थिएनन् । त्यहाँको जीवन गुईंठा बना, जर्ना बटुल्, पानी ल्या, भातभान्सा, खेताला गर्न यस्तै काममा व्यस्त हुन्थ्यो । म शहरको घरको अनुशासनमा उकुसमुकुस हुन्थें । बिहान उठेदेखि राति ओछ्यानमा जाँदासम्म घरका अभिभावकले बनाएको नियम कानूनबमोजिम चल्नु पर्दथ्यो । त्यहाँ साङ्लोमा बाँधिएकी म कामतमा आएपछि उन्मुक्ति पाए झैँ लाग्थ्यो ।
“नानी यहाँ बस ।” म कतिखेर खड्किनी दिदीको घरमा पुगिसकेकी रहिछु । उनी मेरी आमाको उमेरभन्दा ज्यादा उमेरकी थिइन । तिनलाई म अरु सरह नै खड्किनी दिदी भन्थें । मलाई उनले नाकमा लगाएको बुलाकी कानको ढुङ्ग्री र माडवारीले लोभाउँथ्यो । झन् दिदी बोल्दा तिनको ओठसम्म झरेको बुलाकी हल्लिएको दृश्यले मलाई लिङ्गे पिङमा मच्चिएको भान हुन्थ्यो । तिनले कपालको चुल्ठो बाट्दा निधारदेखि कपालको आँख्ला बनाएको हुन्थ्यो । हिन्दी सिनेमाका अभिनेत्री साधना र बबिताको नक्कल गरेर जुडो बनाउने नारी समाजमा हुर्किएकी मलाई खड्किनी दिदीको कपाल कोर्ने ढाँचा अनौठो लाग्थ्यो ।
“दिदी, अहिले म धामी दाइको घरमा बिहेको रमझम हेर्न जान्छु ल, भोलि हजुरआमासँग तपाईंको घरमा आउँछु ।” यति भन्दै म हतारहतार धामी दाइको घरतिर कुदें । धामी दाई उमेरमा मेरो बुवाभन्दा ठूला । बुवाको दाजु मेरो पनि दाजु ।
धामी दाइको घरको आँगनमा गाउँका केटाहरू जग्गे बनाउन व्यस्त थिए । टाउकोमा फेटा, ल बेदा र घुँडासम्म भाँग्रोको सेतो कपडा बेरेका धामी दाइले काम सघाउन आउनेहरूलाई आफ्नो चोरी औंला ठडाउँदै कुनै कुराको निर्देश दिँदै थिए ।’ वंश र उमेरको नाताले मेरो बुवाको उमेरभन्दा ठूलो धामी दाइको बिहे ... !’ म कान्छी औंलाको नङ टोक्दै सोच्न थालें । कति मथिङ्गल मन्थन गर्दा पनि जडसम्म पुग्न सफल भइन । एघार वर्षमात्र टेकेको मेरो कलिलो उमेरको कलिलो मगजले यस विषयको परिमाण निकाल्न सकेन ।
“बैनी, आमा र हजुरामाले तिमीलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, छिट्टै घर जानु रे ।” अघिकै काइँला दाई मलाई लिन आउनुभएको रहेछ । म उहाँको पछिपछि लागेँ । हजुरामा कामत घरको आँगनमा धुनी ताप्दै हुनुहुन्थ्यो । मलाई देख्नासाथ एकैसाथ कराउनु भयो, “छोरी मान्छे भएर एक्लै लखरलखर किन हिँडेकी ।” म निरत्तोरित भएर खुट्टाको बूढी औलाले भुइँ कोट्याउन थालें । राति हजुरआमालाई मेरो माया लागेछ, मलाई भान्सा कोठामा लगेर स्थानीय गाईको बाक्लो दूध दिनुभयो । छोरालाई स्वतन्त्रता र छोरीलाई बन्धक पार्ने हजुरामाको विचारबाट गाउँमा पनि मैले मुक्ति पाउन सकेकी थिइनँ ।
बेहुला अन्माउन र रत्यौलीको निम्तोमा हजुरआमासँग म पनि गएँ । नौमती बाजालाई अघि लाएर धामी दाइ बेहुली लिन जानुभयो । हाम्रो बजारमा ब्याण्डबाजामा “ले जाएगें ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया लेजाएंगे ।” ‘बाबुल की दुआएँ लेती जा’को धुनमा ब्याण्ड बाजा बज्दथ्यो तर, यहाँ बाजादेखि लिएर सबैमा नेपाली संस्कृतिको झलक देखें । राति मलगायत अरु केटाकेटीलाई कोठामा थुनेर आँगनमा आइमाईहरू रत्यौली खेल्न थाल्नुभयो । हामीले बाहिर हाँसोको फोहरा छुटेको र एक दुईवटा छाडा शब्द बाहेक अरु केही सुनेनौ ।
भोलिपल्ट बिहे खान गयौं । धामी दाइकी बेहुलीको सुन्दर मुहार देखेर म हेरेकोहेरै भएँ । उनी चौबन्दी चोली, फरिया, मजेत्रो पटुकी र हेम्बरीमा सजिएकी थिइन् । जन्म घर छोडेर आउँदाको पीडाले होला बेहुलीको अनुहार खग्रास लागेको दिन जत्तिकै थियो तर धामी दाइ भने झलमल्ल लागेको घाम जस्तै उज्यालो भएका थिए ।
“फुच्चाफुच्चीलाई भेला गरेर दरीमा बसाउ ।” सबैको हतार र हल्लाभित्र एउटा आदेश आयो।धुलो उड्दै गरेको आँगनमा ठूलो गुन्द्री ओछ्याएको, थियो मलाई पनि तानेर गाउँका केटाकेटीहरूसँगै राखे । अरु सरह म पनि रमाएर पतकरमा दिएको मासुको झोलसँग भात खान थालें । बिहे भोज अति नै स्वादिष्ट लागेको भएपनि हजुरामाको इशाराको चेतावनीले मलाई अरू थप्न दिएन । ठूलो कसौंडीको भातलाई झिंगाले डम्मै छोपेको थियो ।
बिहेबाट बजारको घर फर्केपछि तीनवर्षसम्म हजुरामाले मलाई कामत घर लानु भएन । धामी दाइको बिहेमा मैले अनुशासन भंग गरेको सजाय थियो त्यो । म भर्खर किशोरावस्थाको सिढीको एक खुड्किला चढ्दा हजुरआमाले मलाई खेतीको घर जान दिनुभयो ।
अब तिमी नछुनी पनि भइसक्यौ, अघिको जस्तो लखरलखर अर्काको घर न चाहार्नु, उता रजस्वला भयौ भने अलग्गै बस्नु । उहाँको आज्ञा सिरोपर गर्नु बाहेक अर्को कुनै बिकल्प थिएन । उहाँले महिनाबारी भएको थाहा पाउनुभयो भने बसेको ठाउँमा पनि पानीले पुछ्न लगाउनु हुन्थ्यो । छुवाछूत भयो भने छोइछिटा गर्नुहुन्थ्यो । हजुरामाको हठधर्मी र संकुचित व्यवहारले गर्दा मैले आफू परसरेको कहिले भन्दिनथेँ । उहाँ जहिले पनि मलाई हपार्दै भन्नुहुन्थ्यो, “यसले नछुनी भएको कहिले भन्दिन, नछुनी परार साल नै काशी गइसकेको हो, यसले छुइछाइ गरेर मलाई नर्क नै पार्ने भई ।” म यस्ता वाइहात कुरालाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिन्थेँ ।
कामत घरमा पुग्नासाथ सधैंको जस्तै पाखुरे, बटियादार, कुतिया र हरुवाहरू हजुरआमाको वरिपरि बसेर हरहिसाब बुझाउन थाले, म अनुमति लिएर खड्किनी दिदीको घरतिर लागें ।
“तीर्थ नानी, सजिलोसँग मुढामाद बस्नुस् ।” खडकिनी दिदीले मेरो अगाडि मुढा राखिदिइन् । तिनले यसरी आदरभाउ गर्दा मलाई असजिलो लाग्यो, अप्ठ्यारो लाग्दै मुढामा बसें ।
“ह्या नानी ! बिहे गर्ने उमेर भइसकेको मानिसले पनि के अप्ठ्यारो मानेको ?” तिनले मेरो छातीमा नजर गाड्दै भनिन् । मैले आफ्नो वक्षलाई दुबै हातका कुइनोले छेकें । चार वर्षको अन्तरालमा खडकिनी दिदीको केश तीलचामल जस्तै भएछ ।
“दिदी, धामी दाजु, धमिनी भाउजूको हालखबर के छ ?” बिहेमा देखेको धामी दाइको उज्यालो अनुहार, धमिनी भाउजूको सुन्दर र आकर्षित अनुहारलाई मैले भुल्न सकेकी थिइनँ । दिदीले मेरो प्रश्नको उत्तर दिइन्, “नानीलाई के ढाट्नु र ! उनीहरुको अहिलेसम्म जायजन्म भएको छैन । दुबैको भित्री मनुवा एकअर्कासँग सन्तुष्ट छैनन् क्यारे ...!” तिनको कुरा नसिद्धि म धामी दाइको घरतिर लागें । धामी दाइको घर फुङ्ग उडेको थियो । सिकुवामा बिहेमा खडकुँलोमा मासु बोक्ने काइँला दाजु एउटी आइमाईसँग ढेस्सिएर बसेको थिए, मलाई देख्नासाथ दुबैजना अलि पर सरेर बसेँ । दुबैलाई मैले चिने तर तिनीहरुले मलाई चिनेनन् । म फनक्क फर्किएर घरतिर लागें । दिउसो धामी दाइको सिकुवामा देखेको घटनाले मलाई सोच्न वाध्य तुल्यायो । म पनि केही कुरा बुझ्ने भइसकेकी थिएँ । भोलिपल्ट हजुरामालाई हिसाबकिताब गर्न सघाउँदा बाहिर कतै निस्किने फुर्सद भएन । बेलुकाको खाना खाएर ओछ्यानमा पस्दा मेरो आँखामा पैंतालीस वर्षको धामी दाइ, पैंतीस वर्षकी धमिनी भाउजू र बीस एक्काईस वर्षका काइँला दाइको तस्वीर आउने जाने प्रकृया जारी रह्यो । तीनैजनाको मनुवालाई मनको तराजुले जोख्ने कोशिस गर्दा पनि परीमाण निकाल्न सकिनँ ।
“तीर्थ, भोलि शनिबार छुट्टीको दिन खेतीका किसान समाजले वनभातको आयोजना राखेका छन् । वनभात खान जाने हो ?”, मेरी आमाको प्रश्न थियो ।
पढाइको व्यस्तताले मलाई फुर्सद हुँदैनथ्यो । झन् कामतबारे सोध्ने र सुन्ने फुर्सद मलाई एक निमेष थिएन । हजुरामा धराबाट विदा भएर अनन्त यात्रामा गएपछि म कामत र कामतका परिवारसँग विमुख भएकी थिएँ ।
“खड्किनी दिदी” यसपटक भने निक्कै चर्को आवाजले बोलाएँ । मेरो आवाजले तिनी तर्सिदै कराइन्, “थुक्क पड्के, तीर्थ नानी पो रहेछ । मेरो कानको जाली झण्डै फुटेको !” म खित्का छोडेर हाँसे ।
“एउटा मुढा ल्याएर बसन नानी ।” तिनले माटो लागेको औलाले मुढातिर उदिष्ट गर्दै भनिन् । मैले आज्ञाकारी छात्रा सरह तिनको निर्देशलाई पालना गरेँ । आज पनि दिदीले मेरो खुट्टादेखि पाइतालासम्म नियालेर हेरिन्, त्यसपछि आफ्नो औंला भाँच्न थालिन् । “नानी, तिमीसित भेट नभएको पनि सातवटा वर्ष भएछ । अहिले त तिम्रो ... फर्सी नै भएछ ।” यसो भन्दै तिनी गलल्ल हाँसिन् । आज तिनको हाँसोमा कुनै आकर्षण थिएन । मैले चाउरी परेको तिनको अनुहार हेरें, त्यहाँ तिनलाई सुहाउने फुली, बुलाकी र ढुङ्ग्री थिएन । तिनी मरुभूमि जत्तिकै उजाड देखिन्थिन् । “आफ्नो जातीय गहना शरीरबाट निकाल्नु र निकालिदिनुको मतलब... गाउँमा ठूलै परिवर्तन भएछ । परिवर्तनको लहरले हाम्रो गाउँघरमा जोगाड गरिएको संस्कृतिलाई पनि सोरेर लगेछ ! भविष्यमा खड्किनी दिदीलाई भेट्ने मेरो कुनै औचित्य रहेन ।
नानी, मेरा शहरिया नातिनी बुहारिले उनीहरूको इज्जत जान्छ, लाज हुन्छ भनेर.. मेरा गहना र गुन्यूचोली मेरो शरीरबाट निकाल्न लगाए । सायद तिनले मेरो मनोभावना बुझेर होला तिनले मलाई स्पष्टीकरण दिइन् ।
परबाट स्कुल पढ्न नजाने बराला केटाकेटीहरुको आवाज मेरा दुबै कानमा ठोक्किए.., पल्लो गाउँमा स्याल करायो, काइँलाले धमिनी कुदायो । “आङ्लाङबाङ आङ्लाङ्बाङ ढुङ्गा हानाहान धामी दाइ र काइँलाको खुट्टा तानातान ।” मैले गीतको भाका नबुझेर दिदीलाई पुलुक्क हेरें । तिनले अर्थ खुलाउन थालिन् ।
“नानी धामी र धमिनीको भित्री मान्छे खुशी नहुँदा सन्तान जन्मिएनन् । काइँलासँग पोइल गएपछि तिनले घ्वाँक्क परेको छोरो जन्माइन् । यता धामीले पनि कान्छी ल्याए, तिनको पनि छोरा र छोरी जन्मिए । सन्तान जन्माउन पनि मनुवा खुशी हुनुपर्ने रहेछ ।”, स्वभाव अनुसार तिनी खितखित हाँसिन्, तिनको हाँसोलाई साथ दिंदै हल्लिने बुलाकी भने थिएन । मलाई दिदीको मनुवा शब्दले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित ‘सुम्निमा’ उपन्यासको सम्झना गरायो । स्वेच्छाले मनपराउनु र जबर्जस्ती कर गर्नुको भिन्नता.. दुबैको अनमेल विवाहमा पाएँ ।
“तीर्थ नानी चिया ।” काइँला दाइ हातमा चियाको गिलास लिएर मेरो सामु उभिएका थिए । तिनको आवाजले छुटेको तरङ्गले, मैले यत्रो वर्षसम्म साँचेर राखेकी मेरा स्मृतिहरू ऐना जस्तै सतचुर्न भएर टुक्रिए ।
साहित्यिक चौतारी नेपालकाे केन्द्रीय महासचिवमा दाङका सुबेदी
साहित्यिक चौतारी नेपालकाे केन्द्रीय महासचिवमा राम प्रसाद सुबेदी संगम चयन भएका छन् । साहित्यिक चौतारी नेपालले केन्द्रीय पदाधिकारी परिपूर्ति गर्ने क्रममा दाङका सुबेदी महासचिवमा चयन भएका हुन् । साहित्यिक चौतारी नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष गीता भण्डारीकाे अध्यक्षतामा भएको भर्चुअल बैठकबाट महासचिवसहित उपाध्यक्ष, सचिव र केही सदस्यहरु थप गरेर कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइएको हाे । बैठकले निबर्तमान महासचिव घायल तिवारीलाई उपाध्यक्षमा बढुवा गरेकाे छ भने सचिवमा रोशन तिमल्सिनालाई चयन गरेकाे छ। त्यस्तै बैठकले सदस्यहरुमा कमला ढकाल, सीता शर्मा, लोकबिक्रम मल्ल , दुर्गा भुसाल र माया उपाध्यायलाई चयन गर्दै कार्यसमितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
चौतारीकी अध्यक्ष भण्डारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिशिर लिङ्देले चारखोले, उपाध्यक्षहरु सरु बस्नेत र नवीन अनुपात, कोषाध्यक्ष कमला भण्डारी, सह- कोषाध्यक्ष श्यामकुमार क्षेत्री मुस्कान र सदस्यहरू तारा घिमिरे र विन्दा पराजुली यथा स्थानमा छन् । संस्थाले प्रशिक्षकमा शंकर ढकाल र प्राविधिकमा शिरिष बन्जाडेलाई समेत नियुक्त गरेकाे छ ।
साहित्यिक चौतारी नेपाल नेपाली भाषा र साहित्यको बिकास र बिस्तार गर्ने उदेश्यसहित २०७१ सालमा स्थपना भई दर्ता भएर नेपाली साहित्यको बिकास र बिस्तारसंगै विभिन्न सामाजिक कार्य समेत गर्दै आएकाे संस्था हाे । साहित्यिक चौतारी नेपालका निबर्तमान महासचिव घायल तिवारीले सहजीकरण गरेकोे कार्यक्रममा नबनियुक्त पदाधिकारीलाई संस्थाकी केन्द्रीय अध्यक्ष भण्डारीले सपथ ग्रहण समेत गराएकी थिइन् ।
अनि सिमलामा सम्झिएँ मेरो देश !
पत्रकारितामा जति सक्रिय छु त्यति नै म घुमफिरमा पनि निकै मन लगाउँछु । नेपालका अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरु घुमिसकेको छु । मेरा लागि घुम्नु भनेको जीवनमा नयाँ अनुभव थप्नु हो । अनुभव बटुल्न म प्रायः फुर्सद मिल्ने बित्तिकै यात्रामा निस्किहाल्छु । विश्वभरी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको कारण केही महिना कोठामै थुनिनु पर्‍यो । त्यतिबेला घुम्न नपाउँदा मलाई अत्यास लाग्थ्यो । अहिले केही सहज भएपछि फेरि यात्रामा जोडिएको छु ।
यात्रा गर्नुअघि इन्टरनेटमा कहाँ घुम्ने भनेर खोजी गरेँ । भारतमा घुम्नलायक ठाउँहरु धेरै रहेछन् । तर, यो मौसममा हिमाञ्चल प्रदेशमा घुम्दाको आनन्द अरु ठाउँमा नपाइने रहेछ । मलाई यो यात्रा अविस्मरणीय बनाउनु थियो । अनि घुम्ने ठाउँ सिमलालाई रोजेँ ।
काठमाडौंबाट करिब १ घण्टा ३५ मिनेटको हवाई यात्रापछि इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ दिल्ली पुगिँदो रहेछ । यहाँ पुगेपछि सिमलाको लागि फ्लाइट वा बसमा जाने निर्णय गर्दै थियौं । साथीले बसमा जाने र यहाँको सुन्दर दृश्य कैद गर्ने अनुरोध गरेपछि हामीले त्यहाँबाट सिमलाको लागि टिकट लियौँ । नयाँदिल्लीबाट ३ सय ४१ किलोमिटरको लामो यात्रामा हामी हिमाञ्चल प्रदेशको राजधानी सिमला तर्फ लाग्यौं ।
केही छिनपछि पानीपत, घरौदा करनाल हुँदै करनाल क्षेत्रमा पुगेर खाजा खायौं । अझै आधाभन्दा बढी नै दुरी हामीले यात्रा गर्नु थियो । अम्बला बजारमा पुगेपछि त्यहाँको बजार निकैँ व्यस्त देखिन्थ्यो । मान्छेहरूको पनि निकैँ चहलपहल थियो । मनमा लाग्यो, भारतको व्यस्त शहरमा अम्बला पनि पर्छ ।
करिब ५ घण्टा बितिसकेको थियो । हामी उतराखण्डलाई छोड्दै पन्जावको नजिक चण्डिगढ पुग्यौं । यो जिल्ला भारतको एउटा केन्द्र शासित प्रदेश हो, जुन दुई भारतको राज्य, पञ्जाब र हरियाणाको राजधानी पनि हो । यसको नामको अर्थ हो चण्डीको किला । यो हिन्दू देवी दुर्गाको एउटा रूप चण्डीका वा चण्डीको एउटा प्रसिद्ध मन्दिरको कारण राखिएको हो । यो मन्दिर अझै पनि यस सहरमा अवस्थित छ । यस सहरलाई सिटी अफ ब्यूटीफुल पनि भनिने गरिन्छ ।
गाडी आफ्नै गतिमा थियो । चण्डीगढबाट बिस्तारै पहाडतर्फ लाग्यौं । केही घण्टाको यात्रापछि सोलन पुग्यौं, जहाँ चारैतिर डाँडाले घेरीएको घना बस्ती मनै लोभ्याउने ठाउँ थियो । बसपार्कमा केही छिनलाई रोकिएको बस फेरि सिमलातर्फ गुड्यो । मनोरम दृश्यलाई नियाल्दा नियाल्दै हामी शोघिमा पुगिसकेका रहेछौं । बिहानको खान यतै खाने निर्णय गर्यौँ । आकाश बटारिँदै थियो । चिसो मौसमको साथमा खान खाएर हामी पुनः सिमलाको यात्रामा लाग्यौं ।
करिब १ बजेतिर सिमलाको मुख्य बजार पुग्यौं । काठमाडौँमा बस्दा सधैं काम, त्यसमाथि कोरोनाको कारण कति दिन घरमै थुनिन परेको पीडा सबै बिर्साउन छु । केही दिनको यो स्वतन्त्र यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउनु छ ।
हामीले यहाँका घुम्नलायक ठाउँहरु रोज्यौं । सबैभन्दा पहिले हिमाञ्चल राज्य म्युजियमको अवलोकनमा निस्कियौँ । ‘आधुनिक कलाको विश्वको अग्रणी संग्रहालयमा तपाईंलाई स्वागत छ’, ठुला अक्षरमा लेखिएको थियो । यहाँ दशकौँसम्मको अवधिमा सिर्जना गरिएका कलाकार्यहरू र यस युगमा सिर्जना गरिएको शैली र कलाको दर्शनलाई दर्साइएको रहेछ । कला र कलाकृतिहरू जस्तै पुरातन उपकरणहरू, पुतली, सिक्का र भिक्टोरियन हवेलीमा परम्परागत कपडाहरु म्युजियमको मुख्य आकर्षक रहेछन् । कलासंस्कृति र हस्तकलाले भरिएको यो म्युजियम साँच्चिकै मनै लोभ्याउने रहेछ ।
हिउँ पर्ने समय भएर होला चिसो निकै । म्युजियमबाट फर्किनेक्रममा बाटोमा चिया र खाजाले पेट टन्नै भरेका थियौं । अबको हाम्रो योजना माल रोड जाने थियो तर, मालरोड घुम्नुभन्दा पहिले ज्याकुहिल जाने सल्लाह भयो । साँझको ३ः५० बजिसकेको थियो । यहाँको केवलकार ४ बजे बन्द हुने रहेछ । हामी केवलकार चढेनौँ । कार रिजर्भ गरेर ज्याकुहिलमा अवस्थित हनुमान मन्दिरतर्फ लाग्यौं । त्यहाँ विश्वकै अग्लो हनुमानको प्रतिमा ठड्याइएको रहेछ । प्रतिमा छेउको हनुमान मन्दिरमा साँझको आरतीको तयारी हुँदै थियो । हामी भने त्यहाँ जान सकेनौँ ।
भोलिपल्ट बिहानको फ्लाइटमा दिल्ली फर्किनु थियो । एकातिर पहाडकी रानी सिमलालाई छोड्न मनै छैन अर्कोतिर दिल्लीमा अधुरो रहेको कामलाई पनि त सकाउनुछ । चारैतिर बत्तीको झिलिमिली उज्यालो छ । हामी भने मालरोडमा लम्किदैँ छौँ । यो ठाउँ सिमलाको प्रमुख ह्याआउट पोइन्ट र सपिंग सेन्टर रहेछ । बेलायती औपनिवेशिक शासनको क्रममा निर्माण गरिएको, मालरोड रिजभन्दा तलको स्तरमा अवस्थित छ । नगर निगमको कार्यालयहरु, फायर सेवा र पुलिस मुख्यालयहरु यहाँ अवस्थित छन् ।
त्यहीँ उता छेउमा सानो पार्क थियो । हामी त्यही बाटो हुँदै गयौं । बुट्टा भरेर सजाइएको त्यो पार्कको छेउमा पिठ्युमा बच्चा र हातमा तरबार बोकेर सारा ब्रम्हाण्डलाई हाँकि दिए झै विजयको लागि युद्धभुमिमा होमिएकी भारतकी नामुद वीराङ्गना झाँसीकी रानी लक्ष्मी बाईको सालिक थियो । त्यो सालिकले आइपरे महिलाले पनि आफ्नो राष्ट्र र भूमिको रक्षाका लागि एक मुठ्ठी सास रहेसम्म शत्रुसँग भिड्न सक्छिन भन्ने साहस झल्काएको थियो । सिमलाजस्तो शीतल, सुन्दर उच्च हिमालयको काखमा रुमलिदैँ गर्दा मैले सम्झिएँ, प्राकृतिक सुन्दरताले भरीपुर्ण मेरो देश । अनि देश बनाउन चाहिने रकम भ्रमण र भत्तामा सकाउने हाम्रा बेकामे संसद र सरकारलाई । कुर्सी र सत्ताको लडाइँमा व्यस्त हाम्रा देशका नेतृत्वकर्ताहरु विश्वका विकसित मुलुक नघुमेका पनि होइनन् । बडेमानका पुलहरु हेरिसकेका ती आँखाले नेपालमा गाडीसमेत खोलाले बगाउँदा पनि देख्दैनन् ।
साँच्चै बजेटको सही सदुपयोग र पारदर्शी रुपमा खर्च गर्ने हो भने ओझेलमा परेका हाम्रा परम्परागत रूपमा निर्मित संरचना, पर्यटक लोभ्याउने तालतलैया, मठमन्दिर र ती दन्ते लहर फिँजाउदै मुस्कुराई रहेका हिमालहरुको काखमा पुग्दाको आनन्द स्वर्गभन्दा कम होला र ? तर, विडम्बना, हाम्रो देशको नीति र नीति निर्माताहरुको सोचले गर्दा आज कयौं पर्यटकीय स्थलहरु संरक्षणको अभावमा छन् । कति संरचनाहरु पर्यटकको पर्खाइमा होलान् ? मनमा अनौठो कल्पनाहरु सल्वलाउन थाल्यो ।
हिमालको काखमा सिमला यी परेलीबाट ओझेलमा पर्दै थियो । त्यहाँबाट कार रिजर्भ गरेर शोघीतर्फ लाग्यौँ । कारको सिसाबाट बाहिरी दृश्य नियाल्दा उज्यालो बत्तीहरुले सिमला बजार झकमक्क परेको थियो । मनमा एक किसिमको शान्तिको आभाष भयो । भिरमाथिको अग्लो डाँडामा बसेको सिमला छुटिसक्यो । हामी भोलिपल्ट बिहानैको फ्लाइटमा दिल्ली जाने योजनामा थियौँ । केवल आँखाबाट टाढिएको सिमला मनबाट भने ओझेल परेन । यहाँ घुम्न आउने फेरि कहिले ? अझै भिज्न मन छ, यो प्रकृतिको वरदान सिमलामा । धित् मरुन्जेल रमाउन मन छ ।
लघुकथा : आमाको मुख हेर्ने दिन
– अवतार ढकाल
“ल नानी बाबुहरु । भोलि स्कुल बिदा । तिमीहरु सबैजनाले आफ्नो आमाको मुख हेर्नु । राम्रा राम्रा उपहार दिनु र दिनभर आमासँगै बस्नु है । अनि भोलि त आमासँग झगडा गर्ने, उहाँलाई दुःख दिने जस्ता काम गर्नु हुन्न नि ।” अन्तिम घण्टीको पढाइ सकिन लागेपछी कक्षा चारका विद्यार्थीहरुलाई सम्झाउँदै सविता मिसले भनिन् ।
सबै विद्यार्थीहरु खुसीले चिच्याए । दोस्रो बेन्चमा बसिरहेको एउटा नयाँ विद्यार्थी अँध्यारो अनुहार लगाएर बसिरह्यो ।
भोलि बिदा । पाले दाइको टुपी सिधा । घण्टी लाग्ने बित्तिकै तँछाड मँछाड गर्दै सबै विद्यार्थीहरु बाहिर निस्किए । कक्षाबाट सबैभन्दा पछि निस्केको त्यही विद्यार्थीलाई मिसले सोधिन्, “विकास तिमीलाई के भको छ ? स्कुल बिदा भको मन पर्दैन हो ?”
“मनपर्छ । तर भोलि चाहिँ ...।” उसले भन्यो ।
“भोलि त झन आफ्नो आमाको मुख हेर्ने दिन हो नि ।” उनले सम्झाइन् ।
“म्याम मेरो ममि हुनुहुन्न । ममि भको भए पो मुख हेर्नु । बाबा र म मात्र कोठामा बस्छौं ।” उसले झन मलिन अनुहार बनाउँदै भन्यो ।
“अनि ममि नि ?” उनले सोधिन् ।
“खै ? हामीलाई छाडेर विदेश जानु भको रे । आउनु भएन ।” आँखाभरी आँसु पारेर उसले भन्यो । उसँग कुरा गर्दा गर्दै सविता एक्कासी भावुक भइन् ।
“अनि ममिको नाम नि ? फोटो देखेको छौ?” उनले सोधिन् ।
विकासले टाउको हल्लाउँदै छैन भन्यो ।
“उसो भए मलाई ममि मानेर मेरो मुख हेर न त ।” भावनामा डुबेर उनले भनिन् ।
उसले उनको अनुहारमा एकछिन हेर्यो र भन्यो, “अनि हजुरका आफ्नै छोराछोरी छँदै छन् होला नि ।”
“छैनन् । मेरो बिहा त गरेको छैन ।” उनले भनिन् ।
अनुहार उज्यालो बनाउँदै उसले “हुन्छ” भन्यो ।
सविता एकाएक सोच मग्न भइन् ।
“ममी .... ए म्याम ! उ मेरो बाबा आउनुभयो मलाई लिन । गेटतिर औंला देखाउँदै विकासले भन्यो ।
सविताका आँखा गेटमा पुगे । नौ बर्ष अगाडि उनलाई धोका दिने उनकै पुर्व प्रेमी उनीतिरै हेरिरहेको थियो ।
खगराज बरालको ‘स्यानी’ माथि अन्तरसंवाद
काठमाडौंः उपन्यासकार खगराज बरालद्वारा लिखित ‘स्यानी’ उपन्यासबारे शनिबार अन्तरसंवाद गरिएको छ ।
साङ्ग्रिला बुक्स प्रालिद्वारा प्रकाशित सो कृतिबारे आयोजित कार्यक्रममा प्रा डा जयराय आचार्यले उपन्यासको शिल्प पक्ष ज्यादै आकर्षक र काव्यमय भएको र करुणरसले भरिपूर्ण भएको बताए । “उपन्यास पढ्दा कुनै भिडियो वा चलचित्रले गर्ने वर्णन भन्दामाथि शब्दले हृदयभित्रका सुक्ष्म अनुभूतिगम्य विषयलाई सम्प्रेषण भएको महसुस हुन्छ”, उनले भने, “शब्दद्वारा शब्दातीत अनुभूतिलाई सम्प्रेषण गर्न सक्नु लेखकीय क्षमताको चमत्कार हो । उपन्यासमा बाल्यकालका घटना, ग्रामीण परिवेशको चित्रण, अनेकानेक चाडपर्वको अति सजीव वर्णन पाइन्छ ।”
अर्का वक्ता डा चन्द्रकला घिमिरेले उपन्यास पहाडी हिन्दू समुदायको चालचलन, विश्वास, प्रचलन, रीति संस्कृति, चाडपर्व, लोक संस्कारका लागि एउटा विश्वविद्यालय नै भएको उल्लेख गर्दै बिर्सँदै गएका वर्तमान आधुनिक पुस्ताले कालान्तरमा यी विषयवस्तु अध्ययन गर्ने बताए । उनले उपन्यासले वैयक्तिक अनुभव र भोगाइलाई औपन्यासिकता दिएर नयाँ प्रयोग गरेको बताए । उपन्यासको शैलीबाट आफू निकै प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै आपूmलाई थोरै उपन्यासले मात्र मन छोएका र यस्तो उपन्यासमा ‘स्यानी’ परेको उल्लेख गरे ।
लेखक बरालले उपन्यास आफ्नो बाल्यकालको अनुभूति र आमाको वियोगको समिश्रण भएको व्यक्त गरे । पाठकका तर्फबाट विचार राख्दै नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक कमलसिंह बमले उपन्यासमा प्रयुक्त भाषा र आञ्चालिकताले आफूलाई निकै आकर्षण गरेको बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसचिव बराल हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष छन् । उनका यसअघि शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रका पुस्तक प्रकाशित छन् ।
नेपाल र भारतका उर्दू साहित्यकारद्वारा गजल वाचन
नेपालगन्ज : बाँकेको नेपालगन्जमा रहेका उर्दू साहित्यकारद्वारा मासिक गजल गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । गुल्जार–ए– अदब बाँकेको आयोजनामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ८ स्थित महेन्द्र पुस्तकालयको हलमा सम्पन्न मासिक गजल गोष्ठीमा नेपाल र भारत काउर्दू साहित्यकारले गजलवाचन गरेका थिए ।
नेपालगन्ज काउर्दू साहित्यकार तथा इमाम अहमद बिन हम्बल विकास केन्द्रका मौलाना तथा इस्लामधर्म गुरु अन्सर नेपालीद्वारा सञ्चालित मासिक गजल गोष्ठीको अवधी साँस्कृतिक विकास परिष्दका अध्यक्ष सच्चिदानन्नद चौवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
सो गजल गोष्ठीमा संविधान सभा सदस्य सर्वतआरा खानम, गुल्जारे अदब बाँकेका अध्यक्ष हाजी अब्दुललती फशौक, सचिव मोहम्मद मुस्तफा अहसन कुरैशी, अवधी साँस्कृतिक विकास परिष्दका अध्यक्ष सच्चिदानन्नद चौवे, अन्सर नेपाली, मेराज अहमद (हिमाल), सभासद तथा उर्दू साहित्यकार अव्दुलहमीद सिद्दीकी (भोला), इल्लियास अन्सारी, सर्वर नेपाली, जमील अहमदहा शमी, भारतका अन्जु मनशहकारे उर्दू उत्तर प्रदेशका अध्यक्ष शरिक रब्बानी, नान पाराका निवासी रसीद ह्यात, मोहम्मदयूसुफ आरफी, युवा साहित्यकार समीर अली बेहना लगायतले ‘आस्तीनों में भी साँपपाले गये’मिश्ररामा आ–आफ्ना गजल वाचन गरेको अन्सर नेपालीले बताएका छन् ।
नेपालगन्जका निवासी वरिष्ठ उर्दू शायर तथा संविधान सभा सदस्य सर्वतआरा खानमका पिता स्व.फारुक अहमद आरफीले नेपालगन्जका उर्दू साहित्यकारको जगबसालेका थिए । त्यसैले आजको दिनमा जगलाई बलियो गुल्जारे अदबले बनाई राखेको संविधान सभा सदस्य सर्वतआरा खानमले बताइन् ।
– सीतादेवी छेत्री, मणिपुर, भारत
बजारमा एउटा पसल राखेका थिए पदमबहादुरले । पसलमा दुई सहयोगी र आफै पनि लाग्दा ग्राहकको सामान दिनलाई आपत हुन्थ्यो । बजारमा पसल भएपनि बसोबास गाउँको शान्ति माहोल नै रूचाएका थिए पदमबहादुरले । उनको धर्मपत्नी जमुनाको कोखबाट दुई जुम्ल्याहा छोरा र एक छोरीको जन्म भएको थियो ।
सानैबाट तीनैजना पढ्नमा मेघावी थिए । आमाबाबुले छोराछोरीलाई राम्रो संस्कार दिएर हुर्काएका थिए । आफ्नो नानीहरूको राम्रो पढाई, राम्रो संस्कार देख्दा आमाबाबुलाई अरू के चाहियो र ? आफ्नो सन्तानसित सन्तुष्ट थिए दुवै । दुई दाई टी.डी.सी. पुगेका थिए । बहिनी रुपा एघारमा दाखिला गरेर हायर सेकेन्डरी जाँदै थिइन् ।
जस्तो नाम उस्तै रुप ईश्वरले पनि दिएका । आमाबाबुले जानेरै नाम राखिदिएका रहेछन् । रुपमा त्यस क्षेत्र र क्याम्पसमा रुपा जतिकी अरू कोही सुन्दरी थिएनन् । बाटोमा हिँड्दा बालक, वृद्ध, जवान महिलासम्म एकचोटि फर्केर हेर्ने गर्दथे उनको सुन्दरतालाई । पाँच फिट चार इन्च जतिकी अग्ली, लामा लामा केश, आँखा मृग जस्ता, गोरो वर्ण हेर्दा अतिनै सुन्दरी ।
गाउँको ठाउँ, दसवीँ पास हुने बित्तिकैबाट कन्य अर्थ आउनेका ताँती थिए घरमा । रुपालाई भने राम्रो पढेर कुनै एउटा जागीर गर्ने विचार थियो । छोरीको इच्छालाई हेर्दै बाबाले कन्यअर्थ आउनेलाई विनम्र हुँदै छोरीको आकांक्षा सुनाउने गर्थे । धनको केही कमी थिएन र पढेसम्म पढाउने विचार थियो पदमबहादुरको ।
रुपा बाह्रमा पढ्दै थिइन् । एक दिन सेकेन्डरीबाट घर फर्किदै थिइन्, बाटोमा तीन केटाहरू मिली पछाडिबाट केही सुँघाएर बेहोस पारे । दुईजनाले छिटो–छिटो बोकेर गाडीमा हाले । अर्काले गाडी चलाएर लगे । एउटा नौ÷दस वर्षको केटो स्कूलबाट आउँदै गर्दा परैबाट रुपालाई बोकेर गाडीमा हालेको देख्यो । छेउमा जाने आँट गरेन र डरायो ।
त्यहाँबाट दुगुर्दै गएर जमुनालाई सबै घटना सुनायो । जमुनाले फोन गरेर रूँदै त्यो केटोले भनेको सबै कुराहरू सुनाइन्, पदमबहादुरलाई । पसल छिटो बन्द गरेर केही सहयोगीलाई लिएर हस्याङफस्याङ गर्दै घर पुगे । गाउँमा धेरै जातिका मान्छे थिए । र उनीहरू सिधै मुखियाका घर गएर भएको घटनाको जानकारी गराए । मुखियाले यसबारे उनलाई केही जानकारी नभएको जनाए ।
रुपाको भाग्य राम्रो थियो होला सायद, गाउँमा सबै भेला भएर खोजी गर्दै थिए । अचानक फौजीहरू त्यता पेट्रोलिङ हिँड्दै आए । सबै भेला भएको देख्दा उनीहरूले सोधपुछ गर्दा कारण पत्तो लगाए । फौजी सीधै मुखियाको घर गएर माइकबाट गाउँका सबैलाई यहाँ अहिले हाँजिर गराउन अर्डर गरे । छिटोभन्दा छिटो हाँजिर हुनु भन्ने निर्देश भयो ।
आधा घण्टासम्ममा गाउँका युवक, वृद्ध, महिलाहरू सबै जम्मा भएका थिए । रुपालाई अपहरण गरेको गाउँका सबैलाई थाहा हुन्छ । सबैले एकछिन आ–आफ्नो भाषामा कुरा गरे । उनीहरूलाई यता–उता फोन लगाएर टुंगो लगाए, गाउँकै केटोले अपहरण गरेको रहेछ भन्ने बुझे ।
यता त्यो अपहरण गरेको केटाले उसको विवाहित बहिनीको घर लगेर गएछ सीधै । बहिनीको आँगनमा गाडी रोकेर तीनजनाले मिलेर रुपालाई बोकेरभित्र लगे । बहिनी तीन छक्क पर्दै सोधिछिन् –‘यो केटी त मेरो स्कूलको सहपाठी रुपा हो । यसलाई के भयो र यसरी बेहोस हालतमा यहाँ लिएर आयौ ?’
‘बहिनी पहिला मलाई माफ गरि सुन ल, यो रुपालाई म आन्तरिक हृदयबाट माया गर्छु । कति चोटी प्रेम प्रस्ताव राखीसकेँ, जहिल्यै इन्कार मात्र गर्छिन् । म उ बेगर बस्नु नसक्ने भएर आज अपहरण गरेर यहाँ लिएर आएको । आज मलाई तिम्रो सहयोग चाहिएको छ ।’
दाइ, तर, आज तिमीले सही काम गरेनौ । एकतर्फी माया कहिले सफल हुँदैन । रुपाको घरमा कति खोजी हुँदैछ होला । उनी त मेरो धेरै मिल्ने साथी हुन् । उ माथिको यस्तो अत्याचार म सहन सक्दिनँ । रुपालाई अहिले उसको घर छोड्नु जाउ ।’
‘तिमी मेरो बहिनी भएर यस्तो भन्छेउ ? कति मुश्किलले आज यहाँसम्म ल्याउनु सफल भएको छु । मेरो माया तिमीले के बुझ्थेउ ?’
रुपालाई अलि–अलि होश आएको जस्तो देखे, तर उ कक्रिएर मुखबाट फिँज निकाल्दै मुख, नाक बङ्गयाउदै दाँत किट्दै थिइन् ।
स्कूलमा पनि यस्तो कहिलेकाहीँ हुने गथ्र्यो रुपालाई । यसलाई छारे रोग यानी मिर्गीको बिमारी छ भन्थे स्कूलमा । यस्तो हुँदा शिक्षकहरूले छिटै अस्पताल पुर्‍याएर घरमा खबर दिने गर्थे । ल अब छिटो अस्पताल पु¥याउनुपर्छ, छिटो गाडीमा चढाउ ।
अस्पताल पुर्‍याई सक्दा रुपाका बुवा, गाउँका थुप्रै मान्छे र मुखियाज्यू त्यहि पुगे ।
हजुरहरू एकछिन शान्तसित बसिदिनुहोस् । म यो केटासित एकान्तमा कुरा गर्छु मुखियाले भनेर त्यो केटोलाई पर लगेर निकै बेर बात गरे । मुखियाले भनेको कुरा कसैले हस्तक्षेप गर्दैनन् र सबै शान्त भएर बसे ।
दुई घण्टा जतिमा रुपालाई होश आयो । छक्क पर्दै वरपर हेर्दै थिइन् । अहिलेसम्म उसँग के–के भयो बेखबर थिएन । बुवाले छेउमा आएर सोधे ‘नानी तिमीलाई अहिले कस्तो छ ?’
‘अलिक टाउको भारी भएर दुःखेको छ । बुवा म त क्याम्पस गएको थिए । यहाँ कसरी आए ?’
‘तिमी बेहोश भएछौ र हामीले लिएर आएको छोरी । तिमी आराम गर्दै गर ल, म डाक्टरलाई भेटेर आउछु’ भनी निस्किए । डाक्टरले रुपालाई एकचोटी जाँच गरेर हेरेपछि अब घर लग्दा हुन्छ भने ।
अर्को दिशातिर गाडी गएको देखेर रुपा छक्क पर्दै एकछिन त सोचिरहिन् । डराउँदै बुवालाई सोधिन् –‘घरतिर नगएर हामी कता जाँदै छौँ ? आज तेरो काकाको घर जाने हो । भोलि बिहान घर फिर्ता हुने हो ।’
‘काकालाई केही भएको त छैन नी बुवा ?’
‘केही भएको छैन भेटघाट गरौँ भनेर हो । तँ केही चिन्ता नगर ।’ भन्दै सोचे – ‘यसलाई ती केटाले बेहोश गरेको केही याद छैन सायद‘ केटाहरूले अपहरण गर्नुभन्दा पहिलै यसलाई बिमारीले छोपिसकेको रहेछ होला र केही सम्झना छैन । नत्र भए केही त भन्थी ।’
बाटैबाट भाइलाई हामी आउँदै छौँ भनि खबर गरे । भाइको घर पुगेर रातीको खाना खाएपछि पदमबहादुरले आज घटेको घटना सुनाए ।
‘मैले अगिनै पुलिसमा एफ.आई.आर. गर्छु भनेको थिए । मुखिया बाले यो गाउँका मामला हो म नै मिलाउँछु भन्दै थिए । आमाको रोएर हालत बिग्रेको छ भन्दै थिए गाउँकाले ।’
‘भोलि रुपालाई लगेर जानु पर्छ । नत्र डराएर लुकाएको भन्छन् । आफ्नो मानो खानु छ किन डराउने तिनीहरूसित । म एकचोटी थर्काएर आउँछु । चेलीको रक्षा गर्न आउँछ मलाई ।’
‘म त एक–दुई दिन यहाँ छोरीलाई राख्छु सोचेर आएको थिए, तर तिम्रो कुरा सुन्दा सही लाग्यो । हामीले के बिराएका छौँ र ? मुखियाबाले सकेनन् भने त्यो केटाहरूलाई जेल पुर्‍याउनुपर्छ ।’
रुपा, पल्लो कोठामा बसेर सुनिरहेकी थिइन् छक्क पर्दै । त्यो केटामाथि कति रिस उठ्दै थियो । अहिले गएर ठूलो लौरोले हान्न मन लाग्दै थियो ।
भोलिपल्ट बिहानै भाइ–बुहारीसहित गाउँ पुगे । उनीहरू आएको खबर सुनेर मुखियाज्यू भेट्न पदमबहादुरको घर पुगे ।
गाउँमै केश मिलाउ, प्रहरी नबोलाऔं भन्ने सल्लाह दिए मुखियाले । त्यहाँको नियममा गाउँका मुखियाले सभामा दिएको आदेश सबैले पालन गरेको हुनै पर्ने नियम थियो । यहाँसम्म कि मुखियाको आदेश पालन नगर्नेलाई गाउँबाट निकाल्ने नियम थियो ।
पदमबहादुरको भाइले मुखियालाई सोधे –‘के ग्यारेन्टी छ कि फेरि त्यो केटाले यो हर्कत गर्दैन भन्ने ? हामीलाई त केश फायल गरेर त्यसलाई जेल हाल्ने मन छ ।’
‘काम पनि माफी दिन लायक गरेको छैन केटोले । गाउँमा सबैको इज्जतको सवाल छ । यो कुरा गाउँबाट बाहिर गयो भने सबैको बदनाम हुन्छ । हुने नहुने अनेक लाञ्छना लगाउँछन् । म ग्यारेन्टी लिन्छु रुपा मेरी पनि छोरी हो । यो गाउँको एउटा घमण्ड पनि हो उसको सुन्दरता ।’
पदमबहादुरले निकै बेर सोचे, अनि भने, ‘छोरीसित केही अनर्थ हुनुबाट भगवानले बचाए । मुखिया ज्यू हजुरले यसरी ग्यारेन्टी लिन्छु भन्दा हामी पुलिस केश नगर्ने भइयो । तर आइन्दा फेरि यस्तो घटना नहोस् । राम्रोसित मिलाई दिनुहोस् ।’
भोलिपल्ट नै मुखियाले गाउँका सबैलाई बोलाएर सभा राखे । सबैले पहिला केटाको बयान सुन्ने भए ।
त्यसले सबैको अगाडि माफी माग्दै भन्यो– ‘मैले गरेको काम माफी गर्ने योग्य छैन तर आज यो सभाको अगाडि भन्छु, आजबाट रुपालाई म मेरो बैनीको नजरले हर्नेछु । र उसको हिफाजत गर्छु । के बुद्धि आयो मलाई यस्तो काम गरेँ । रुपालाई मैले छोएको पनि छुइन, यसको साक्षी यो मेरो दुई साथी र बहिनी छन् । हुनसक्छ भने यो पापीलाई माफी गरिदिनुहोस् ।’ भन्दै बिन्ती चढायो ।
लामो बहसपछि सबैले एकपल्टको लागि माफ गर्ने निर्णय गरे । आइन्दा यसले गाउँमा कुनै प्रकारको घटना गरे, परिवार सहित गाउबाट निकासित गर्ने लेखापढी गरी सभा विसर्जन गरे ।
लघुकथा : गम्बुट लाउने चाहना
–विष्णु ठकुरी राई, खर्साङ
उसको नाउँ जितेन ! सबै साथीहरू उसलाई जितु भनेर बोलाउने गर्थे । जन्म र मृत्यु के हो भन्ने विषयमा ज्ञान नहुँदा नै उसकी आमाको देहान्त भएको थियो । बाबु भएता पनि आमा नभएको टुहुरो केटा । वर्ष दिन नपुग्दै बाबुले अर्की स्वास्नी याने सानी आमा भित्राए । केही महिना सम्म त ठीकै थियो तर सानीआमाले छोरो जन्माए पछि जितुको लालनपालनमा कमी आयो । सानी आमाले अर्को सन्तान पाएपछि बाबु पनि साना बाबुको भुमिका निभाउन वाध्य भए सायद । बल्लतल्ल सात बर्षको उमेरमा गाउँ कै प्राथमिक पाठशालामा भर्ना गरिदिए । तर त्यस बेला पाठशालामा चाहिने खाता किताब पेन्सिल आदि भने मुश्किलले किनिदिन्थे बाबुले । लेख्ने पेन्सिल नहुँदा साथीहरुले उनेरले आफ्नो पेन्सिलको ठुट्टे टुक्रा दिन्थे ।
अहिले जस्तो प्राथमिक पाठशालामा सरकारी सहुलियत पाइदैँन थियो । अहिले त दिउँसोको खाना, खाता किताब, युनिफर्म, जुत्ता सबै पाउने प्रावधान छ । ।पाठशाला पछि घरमा काम पनि गर्नु पर्ने, नानी हेर्नु पर्ने, अलिकति काम बिग्रे गाली र कुटाई खाएर भोको पेट सुत्न पर्ने जितुलाई । यसरी नै दिन महिना बित्दै गए ।
जसरी तसरी जितु दोस्रो कक्षामा पुग्यो । बर्खायाममा प्रायः साथीहरू गम्बुट लाएर स्कूल आउने, कोही पानी जुत्ता तर जितुलाई एक जोडी चप्पलसम्म थिएन । सबैले गम्बुट लाएर स्कूल आउने साथीहरू देखेर उसलाई पनि गम्बुट लाउने रहर भयो । एकदिन, आफ्नो बाबुलाई गम्बुट किनि मागे । उसको बाबु कुनै एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे । काम र जमानाअनुसारको तलबले एक जोडी गम्बुट किनिदिन सक्ने तर कान्छी स्वास्नीको डरले आफ्नो पहिलो छोराप्रति आफ्नो कर्तव्य निभाउन सकेका थिएनन् । र पनि छोरालाई यसपालिको तलब पाएपछि किनिदिने वचन दिए । त्यो दिन जितु धेरै खुशी भएको थियो । बाबुले तलब पाएपछि रातो रगंको गम्बुट किनि माग्छु भनेर मनमनै रमायो ।
आज १ तारिख बाबुले तलब पाउने दिन । भोलि त बाबुले गम्बुट किनेर ल्याउनु हुनेछ । मीठो सपना देख्यो जितुले । बिहान भान्सा घरमा बाबुले सानो आमालाई ‘आज त म जितेनलाई एक जोडी गम्बुट किनिदिन्छु’ भनेर मात्रै के भनेथ्यो सानीआमाले ठूलो स्वरमा कुन खुट्टामा लाउँछ त्यसले गम्बुट तेही खुट्टा भाँचिदिनेछु भन्दै बाबुलाई कराउन थालिन् । भान्सा घरको बाहिरी भित्तामा अडेस लागेर सुनिरहेको जितु रुँदैं भागेर बाख्राको खोर मुनी लुक्न पुग्यो । उसको गम्बुट लाउने रहर सानी आमाको कर्कश आवाजले चक्नाचूर बनायो । आँखाबाट आएको बलिन्द्रधाराले गम्बुट लगाउने रहर, एउटा बाल्यकालको मीठो सपना बगाएर लग्यो । विचरा जितु !
– जगत थापा, बझाङ
सुख शान्ति मनमा आनन्द के पाउनु हुन्छ ।
पोष्टर टाँस्नु हुन्छ आफन्त बोलाउनु हुन्छ ।
बा पैसा नभएकै कारण मरेका हुन भाई
मरेपछि पैसाको माला किन लगाउनु हुन्छ ।।
जहाँ सुनसान हुनेछ म मात्र बस्ने घर हुनेछ ।
त्यो दिन भने तिम्रो लागि एक अवसर हुनेछ ।
तिमीले सिउँदोमा अर्कैको सिन्दूर भरेपछि
म मर्नेछु र तिमीलाई खुशीको खबर हुनेछ ।।
म मर्दा बाटो भरि चक्काजाम हुनेछ ।
स्वच्छ वातावरण घाम नै घाम हुनेछ ।
ठुलै खुशीको खबर हुनेछ तिमीलाई
सबै रुनेछन् र मुखमा राम राम हुनेछ ।।
मैले अझै पनि न माया न ममता पाएको छु ।
जमीनमा मेरी आमाको फोटो सजाएको छु ।
मलाई संसार देखाएकै दिन संसार छोडेपछि
फोटो बनाई आमाको काखमा निदाएको छु ।।
आखिर उसलाई मेरो न चिन्ता न पिर लागेछ ।
आज सिउँदोमा सिन्दूर स्वरुप अबिर लागेछ ।
उसलाई खुसी किन्न म परदेश आएको बेला
उता गाउँमा भने प्रेमिकालाई मंसिर लागेछ ।।
– बिन्दु खत्री, सुर्खेत
हरेक पल यो मनले उसैलाई सम्झिएको छ,
त्यहि सम्झनामा नै यो गजल लेखिएको छ ।
भगवान ! उसको सबै दुःख म खप्न चाहान्छु,
किनकी मेरो कारण उसले आँसु पिएको छ ।
तिमीलाई पाउने त म भाग्यमानी हुँ प्यारा,
तिमी आएदेखि मेरो सबै खुसि फर्किएको छ ।
अनगन्ती चोटहरूले यो मुटु चिरिएको बेला,
सियो धागो उसैले ल्याई यो मुटु सिएको छ ।
अब मुत्यु हैन ! म जीवन चाहान्छु ‘महोदय’
किनकी कसैले बाँच्ने आधार दिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्दै